Muqdisho: Qaraxyo iyo Weerar Ka Dhacay Hoteelka Naasahablood 2 • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Muqdisho: Qaraxyo iyo Weerar Ka Dhacay Hoteelka Naasahablood 2
Muqdisho: Qaraxyo iyo Weerar Ka Dhacay Hoteelka Naasahablood 2
October 28, 2017 - By: Omar Akhyaar
Weerar loo adeegsaday gaari bambaano lasoo saaray ayaa lagu weeraray Hoteelka Naas-hablood 2 ee degmada Xamar weyne ee magaaladda Muqdisho. Qaraxaasi waxaa xigay koox hubaysan oo gudaha u galay Hotelka.
Suxufi ka tirsan Idaacada Kulmiye oo goobta qaraxu ka dhacay tegay ayaa sheegay inuu indhihiisa ku arkay Meydadka illaa 10 Qof oo Shacab ah oo ku dhintay Qaraxa islamarkaana ay ku jiraan kuwo Saarnaa Gaadiid Goobta marayay.
Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sidoo kale laga daadgureeyay Dhaawacyo gaaraya ilaa 15 Qof oo ay qaadeen Gaadiidka Gurmadka deg dega ah.Waxaana weli Hotelka laga Maqlayaa Rasaas ka dhaceysa,iyadoo Ciidamada Ammaanka ay xireen Goobta uu Qaraxu ka dhacay.
Wararku waxay intaas ku darayaan in Qarax kale uu ka dhacay Meel u dhow Taalada Daljirka Dahsoon oo aan ka fogeyn Hotelka Naasa-hablood 2 ee Degmada Xamar-weyne oo qaraxa kowaad iyo weerarka xigay uu ka dhacay.
Cabdullaahi Aadan oo ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Banaadir ayaa u sheegay Wakaaladda wararka Reuters in qaraxu uu ka dhacay Meel u dhow Tiyaatarka qaranka. Khasaaraha ka dashay weerarkaasi ayuu sheegay inay tahay weli goor hore in la xaqiijiyo tirada dhimashada iyo dhaawaca.
“…Dagaal ayaa ka socda gudaha hotelka, Hotelka waxaa badanaa dega saraakiisha ciidamada, Qareeno iyo siyaasiyiin…” ayuu yiri
Qaraxyada iyo weerarka ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaaladda Muqdisho uu ka socdo shir hordhac ah oo ay yeelanayaan Madaxda federaalka iyo maamul goboleeyada dalka, kaasi oo lagu xalinayo khilaafka soo kala dhexgalay iyo waliba sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka Al Shabaab.
Waxaa kaloo weerarkan uu imaanaya iyadoo labo todobaad kahor Muqdisho uu ka dhacay Qaraxii Isgoyska Soobe oo ay ku dhinten ugu yaraan 358 qof oo shacab ah, tiro intaas leegina ay ku dhaawacmeen.
Faah faahin dheeri ah Kala Soco Horseed-Media